မြန်မာက နယ်စပ်အနီး စစ်တပ်များ ချထားလာသည်ကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အကြောင်းကြား၊ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများ အလုံးအရင်းဖြင့် ထပ်မံဝင်ရောက်လာနိုင်သည်ဟု ဒါကာအစိုးရ သတိပေး၊ – H2Oupdatenews
မြန်မာက နယ်စပ်အနီး စစ်တပ်များ ချထားလာသည်ကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အကြောင်းကြား၊ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများ အလုံးအရင်းဖြင့် ထပ်မံဝင်ရောက်လာနိုင်သည်ဟု ဒါကာအစိုးရ သတိပေး၊
oungmarine11@outlook.com 22/09/2020	No Comments
မြန်မာနိုင်ငံက အခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွားလာစေခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန်နှင့် လုံခြုံရေးအရ စစ်ဆင်ရေးကို ယိုးမယ်ဖွဲ့လျှက် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်း ရိုဟင်ဂျာဟုဖော်ပြ ) များအား ပစ်မှတ်ထားခြင်းမပြုရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံ ရေးကောင်စီ UNSC တွင် အရေးတကြီး တောင်းဆိုလိုက်သည်ဟု United News of Bangladesh ( UNB ) က ယမန်နေ့ရေးသားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လုံခြုံရေးအရဆောင်ရွက်သော မည်သည့် စစ်ဆင်ရေး၌မဆို အရပ်သားများအား ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိကြောင်း UNSC က သတိပေးရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က တိုက်တွန်းလိုက်သည်ဆို၏။
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့် မြန်မာအကြား နိုင်ငံတကာနယ်ခြားအနီး လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်သည့် “ အသိပေးလွှာ “ တစ်စောင်ကို လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌထံ လိပ်မူ၍ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အမြဲတန်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါစာလွှာတွင် လက်ရှိအဖြစ်အပျက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က အထူးတလည် စိုးရိမ်ပူပန်လျှက်ရှိကြောင်း လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ အသိပေးပါရန် UNSC ဥက္ကဋ္ဌအား တောင်းဆိုထားကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာနယ်စပ်အနီး အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ လှေများအား အသုံးပြု၍ တပ်များကို အလုံးအရင်းဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမှာ နားလည်မှုလွဲမှားစေနိုင်ပြီး မထင်မှတ်သောဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏ အမည်မဖော်လိုသူ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လမှ စက်တင်ဘာ ၁၀ အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြားရှိ နယ်စပ်အနီး နေရာများတွင် ထူးခြားပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ် ၃၅-ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ အရာရှိများက ရှင်းပြသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၀-ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ရေတပ်မတော် စစ်သင်္ဘော ၄-စီးတို့က အင်းဒင်ရွာအနီးကမ်းလွန်တွင် ကျောက်ချခဲ့ကြောင်း ထို့နောက် နတ်မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်ရှိ အရပ်ဖက် ငါးဖမ်းလှေ ၂၀ ခန့်အား အသုံးပြု၍ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို သို့ တစ်ညလုံး သယ်ပို့ပေးခဲ့ကြောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၁-ရက်နေ့တွင် မောင်တောမြောက်ပိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား နိုင်ငံတကာနယ်အနီး နေရာအသီးသီး တို့၌ မြန်မာတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁,၀၀၀ ခန့် တပ်စွဲခဲ့ကြောင်း၊ တပ်များဖြန့်ချရာ လမ်းကြောင်းသည် နှစ်နိုင်ငံနယ်ခြားတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှ မီတာ ၂၀၀ ခန့်သာ ကွာဝေးကြောင်း၊
စက်တင်ဘာ ၁၃-၁၄ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့၌ ( မြန်မာ့တပ်မတော်က ) အကြမ်းဖက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ” နယ်မြေရှင်းလင်းခြင်း “ ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် အရပ်သားများ ထိခိုက်သေဆုံးမှု ရှိခဲ့ကြောင်း၊ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဘက်၌ အရပ်သားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ကာကွယ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် လူမျိုးစုအသီးသီးတို့ ထပ်မံဝင်ရောက်လာနိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မည်သည့်လုံခြုံမှု စစ်ဆင်ရေး၌မဆို ပြည်သူလူထုအား အလွန်အမင်းဂရုစိုက်လျှက် အပြည့်အ၀ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် နိုင်ငံတော်တာဝန်အဖြစ် တည်ရှိသည်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က အလေးအနက်ပြောကြားလိုကြောင်း၊
၂၀၂၀-ခုနှစ် ဇွန် ၄ ရက်၊ ညနေ ၃း၀၀ မှညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိ ဒါကာအစိုးရသည် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းလျှက် နယ်ခြားမှတ်တိုင်အမှတ် BP-35 အနီး နိုင်ငံတကာနယ်ခြားမှ ကိုက် ၅၀၀ ခန့်အကွာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်ဘက်ရဟတ်ယာဉ်များ အကူအညီပါဝင်သည့် စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ( ယခုစစ်ဆင်ရေးတွင်မူ ) မြန်မာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ ကြိုတင်အကြောင်း ကြားခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာနယ်ခြားအနီး မြန်မာဘက်၌ ပစ်ခတ်မှုနှင့် ပဋိပက္ခများ ပြင်းထန်လာခြင်းမှာ နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ခြိမ်းခြောက်လျှက်ရှိကြောင်း၊
ထိုအတွက် မြန်မာက နယ်စပ်အနီးဖြန့်ချ ထားသည့် ၎င်း၏တပ်များကို ချက်ချင်းရုတ်သိမ်းသင့်သည်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ရှု့မြင်ကြောင်း၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄-ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးအောင်ကျော်မိုးအား ဆင့်ခေါ်၍ မြန်မာအစိုးရ နေပြည်တော်သို့ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်းဆိုသည့် သီးခြားစာလွှာပေးပို့ခဲ့ကြောင်း၊ UNSC ဥက္ကဋ္ဌထံ ပေးပို့စာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတကာနယ်စပ်တစ်လျှောက်အနီး ( မြန်မာက ) ယခုကဲ့သို့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းမှာ နှစ်ဘက်စလုံးတွင်ရှိနေသော ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအတွက် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု သတင်းရပ်ကွက် များက ပြောဆိုသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိစပ်လျှက်ရှိသော နယ်စပ်တစ်လျှောက် နိုးကြားရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး မည်သည့် အဖြစ်အပျက်ကိုမျှ မတွေ့ရသေးကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မကြာမီကျင်းပရန် နီးကပ်လျှက်ရှိနေပြီး မည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲမဆို ကျင်းပချိန်မတိုင်မီ ပြည်တွင်းရေးအပြောင်းအလဲများ အမြဲဖြစ်လေ့ရှိသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတင်း၌ ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။
ယခုသတင်းကို ဘင်္ဂလားအခြေစိုက် The Daily Star က ယမန်နေ့ရက်စွဲဖြင့် ဖော်ပြရာ၌ စက်တင်ဘာ ၁၀-ရက် မြန်မာ့ရေတပ်မတော် စစ်သင်္ဘော ၄-စီးက အင်းဒင်ကျေးရွာအနီး ကျောက်ချရပ်နားခဲ့ကြောင်း၊ နတ်မြစ်တစ်လျှောက် အရပ်ဖက်ငါးဖမ်းလှေ အစီး ၂၀ ကျော်အား အသုံးပြုကာ မောင်တောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်း ၁၂-မိုင်ခန့်အကွာ ငါးခူရကျေးရွာအနီးအထိ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးတစ်ဝှိုက် ညတွင်းချင်း တပ်ဖြန့်ချခဲ့ကြောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် နံနက်စောစောတွင် မြန်မာတပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁,၀၀၀ ခန့်သည် နေရာဒေသ အမျိုးမျိုးသို့ ဆင်းသက်တပ်ဖြန့်ခဲ့ရာ ကညင်ချောင်း၊ မင်္ဂလာကြီးနှင့် ငါးခူရကျေးရွာများအနီး နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်မျဉ်းနှင့် ကိုက် ၂၂၀ ခန့်အထိ နီးကပ်စွာ ရှိနေကြာင်း၊
မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်များအရ စက်တင်ဘာ ၁၃ နှင့် ၁၄ ရက် ည သန်းခေါင်ယံတွင် မောင်တောမြို့ နယ် ရေခတ်ချောင်း ဂွဆုံ၌ ( မြန်မာ့တပ်မတော်က ) ရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ကျား ၅-ဦး၊ မ ၃-ဦးတို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
((( United News of Bangladesh., SEPTEMBER 21, 2020,” Troops Deployment: Bangladesh seeks immediate steps on Myanmar by UNSC. Bangladesh alerts UNSC about further influx of Rohingyas.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)))
Previous Previous post: “ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး …. ဒို့အရေး … ဒို့ အရေး ““ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စံနစ် …. အလိုမရှိ … အလိုမရှိ “
Next Next post: ဆော်ဒီက ၎င်းနိုင်ငံရောက် မပြန်နိုင်သေးသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်များအတွက် နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း တိုးပေးထားရန် ဆုံးဖြတ်ဟု ဆို။ ဆော်ဒီလေယာဉ်များ အကန့်အသတ် မရှိ ပျံသန်းရန် ဒါကာ အစိုးရ ခွင့်ပြုပေးရ။